nyaalinkarr@gmail.com သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစဖော်မရအောင် ပျက်စီးသွားပါသဖြင့် အသိပေးခြင်း။
Myanmar IT Resource Forum » FREE TALKING ZONE » » Free Talking » nyaalinkarr@gmail.com သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစဖော်မရအောင် ပျက်စီးသွားပါသဖြင့် အသိပေးခြင်း။
1 nyaalinkarr@gmail.com သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစဖော်မရအောင် ပျက်စီးသွားပါသဖြင့် အသိပေးခြင်း။ on 31st August 2011, 10:55 am
အကြောင်းအအရာ ။ ။ [You must be registered and logged in to see this link.] သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစဖော်မရအောင် ပျက်စီးသွားပါသဖြင့် အသိပေးခြင်း။
အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလင်္ကာည ဘလော့သို့ လာရောက်ဖတ်ရှုကြသော သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အဆက်အသွယ်ပျက်နေရုံမျှမက ကျွန်တော်နှစ်သက်မြတ်နိုး၍ တစိုက်မက်မက်ရေးသား လျှက်ရှိသော ဘလော့ထဲသို့ပင် ၀င်မရဖြစ်နေရပါသည်။
၄င်းအပြင် 25/8/2011 ရက်နေ့မှစ၍ [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုလည်း ၀င်ရောက်အသုံးပြု၍မရပါ။ Recovery ^ Secondary တို့အားအသုံးချပြီး ကြိုးစားဆောင်ရွက်သော်လည်း ပြန်လည်မရရှိခဲ့ပါသဖြင့်
26/8/2011 ရက်နောက်ပိုင်း [You must be registered and logged in to see this link.] နှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာများရှိခဲ့ရင်လည်း
နောက်နောင်သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့် [You must be registered and logged in to see this link.] ကို ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန် အနူး အညွတ် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၀ါသနာအရတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမရသည့် ဘလော့ရေးခြင်းကို ကျွန်တော်တို့နည်းတူ အခြားသောဘလော့ချစ်သူများ
သည် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးကြလိမ့်မည်ဟုလည်း မျှော်လင့်မိပါ သည်။
လွတ်လပ်မှု၏ တန်ဖိုးကို ရှာဖွေကြသော ကျွန်တော်တို့သည် အတားအစီးအဖြတ်အတောက်မရှိ လွတ်လပ် စွာရေးသားနိုင်သော ဘလော့ကို အခက်အခဲအမျိုးမျိုး ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအမျိုးမျိုးကြားမှ ဆက်လက်ရေးသား သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အားလုံးသော သူငယ်ချင်းများကို ခင်မင်စွာဖြင့်